Ny vomanga sy ny voka-tsoa entiny - Astuce de grand-mères malagasy
par Tatiana Razanadraibe	 30 mai 2018 Écrire un commentaire
Ny vomanga dia miaro amin’ny homamiadana no sady mampalefaka volo.
Manomboka izao dia samia mividy azy io fa tena misy voka-tsoa entiny. Ahitana singa mahasoa betsaka izy io. Ao anaty vomanga 100g dia ahitana:
proteine 2,9g ;
siramamy 42,5g ;
menaka 0,5g ;
ary kalorie 182 kilocal .
Na dia efa andrahoina aza dia mbola miraikitra ny vitamine A sy C betsaka ary ny mineraly.
Fataro ihany koa fa ny raviny mbola tanora dia ahitana vitamine A sy C .
Ny vomanga sy ny aretina arovany
Ny vomanga sy ny fanapoizinana ara-tsakafo
Ny volo tsy mila defrisage
Manampy betsaka amin’ny famerenana ny mety hahazoana ireo karazan’aretina mifandraika amin’ny fahanterana izy io. Anisan’izany ny homamiadan’ny vihin-dahy, ny aty, ny nono, sns.
Miaro amin’ny aretin’ny fo sy ny lalan-dra ihany koa izy .
Voalaza fa mahatongan’ny insuline ho mora raisina ny fihinana vomanga fotsy. Arak’izany ihany koa dia tsara izy ty hoan’ny olona voan’ny diabeta type 2. Vomanga fotsy izany no tsara hoan’olona marary fo sy ny diabeta type 2 satria mandritra tsara ilay atao hoe Taux de glycémie.
Akoatrizay dia miaro amin’ny fanapoizinana ara-tsakafo na allergie ara-tsakafo ihany koa dia toy izao no hatao:
Kikisana ny vomanga lena. Atao izay hazahoana 2 sotro lehibe dia asina menak’oliva 1 sotro lehibe fihinana dia iny no indray hohanina. Fa tsy hanahy ianao.
Ny kohadavareny (tsy haiko ny dikany fa ahitsio ny anarany amin’ny teny hafa) dia maka ireny tsirina-vomanga ireny 1 tanana feno tsara ary arotsaka anaty rano 1l mafana miaraka amin’ny ravinafary 1m dia sasana ka ampangotrahana 5mn. Io no sotroina 1 kopy maraina /atoandro/hariva mandritran’ny herinandro.
Eo amin’ny lafiny hatsarana indray dia betsaka antioxidant ny vomanga. Io singa io moa dia miaro amin’ny fahanterana aloha lotra. Ampiasao amin’ny volo izy ity fa mampalefaka sy manome aina ny volo. Mitsabo ihany koa ka toy izao no hatao :
Ankondro 1 masaka tsara;
Atsasaka zavoka masaka tsara;
Tantely 1 sotro kely;
Rano matymaty ,1,5l.
Alonao anaty rano 6 ora aloha ilay ravimbomanga dia potsero ny zavoka sy ny akondro ary ny tantely.
Mixeo tsara ireo fangaro ireo ary avelao ao anaty vata fampangatsiahana indray alina vao ahosotra ny hodi-doha sy ny tendrombolo.
Avy eo dia avelao hilona 50mn farafahakeliny vao kobanina amin’ny lay ranon’ilay ravimbomanga. Azonao ampitomboina ny fatranilay rano.
Tsara raha averina indroa isan-kerinandro mandritran’ny iray volana fa tena mampalefaka sy miaro ny volo tokoa.
Nanolotra : bebe Tsa Be Tarogna , notsongaina tao amin’ny vondrona Diary (ny lasa tsy mba fanadino).
Mofo mangahazo à la cannelle
ady vomanga, fahandro vomanga, fandrahoana vomanga, vomanga malagasy, vomanga recette
Article précédent : Ny Hary Madagasikara et le Centre d’accueil Antseranantsoa
Madagascar se présente comme un point de rencontre des requins-baleinesArticle suivant :